Amosi 8 - Holy Bible [Xhosa Bible 1975]
Yenjenje ukundibonisa iNkosi uYehova: Nantso ingobozi ineziqhamo zasehlotyeni.
Yathi kum, Ubona ntoni na, Amosi? Ndathi, Ingobozi,ineziqhamo zasehlotyeni. Wathi uYehova kum, Isiphelo sibafikele abantu bam amaSirayeli; andiyi kubuya ndiphinde ndidlule kubo.
Ziya kuba kukubhomboloza iingoma zetempile ngaloo mini;itsho iNkosi uYehova. Zininzi izidumbu; uziqungquluzisile ezindaweni zonke; thwize!
Yivani oku, nina bawazondayo amahlwempu, ukuba nibaphelise abaziintsizana belizwe, nisithi,
Kuya kugqitha nini na ukuthwasa kwenyanga, sithengise ngengqolowa? Iya kugqitha nini na isabatha, sivule izisele zengqolowa, ukuze sinciphise iefa, sikhulise ishekele,sigqwethe isikali, sibe sesokukhohlisa?
ukuze sizithenge izisweli ngesilivere, namahlwempu ngeembadada ezimbini, sithengise ngomdlungu wengqolowa?
Ulifungile uYehova iqhayiya likaYakobi, esithi, Inyaniso,andiyi kuzilibala naphakade izenzo zabo zonke.
Aliyi kugungqa na ngenxa yoku ilizwe, benze isijwili bonke abemiyo kulo? aliyi kunyuka na lonke liphela njengoMnayile,lisuke amadlu, liwuthe njengoMnayile waseYiputa?
Kothi ngaloo mini, itsho iNkosi uYehova, ndilitshonise ilanga emini enkulu, ndenze ubumnyama ehlabathini ngemini elisileyo.
Ndiya kuyijika imithendeleko yenu ibe sisijwili, neengoma zenu zonke zibe sisimbonono; ndinxibe ezimnyama zokuzila ezinqeni zonke; ndichebe zonke iintloko, ndikwenze konke oko,kube njengesijwili esenzelwa umntwana okuphela kwamzeleyo,nokuphela kwako kube njengomhla okrakra.
Yabonani, kuza imihla, itsho iNkosi uYehova, endiya kuthumela ukulamba kulo ilizwe, kungabi kuko ukulambela isonka,kungabi kuko ukunxanela amanzi; kube kukulambela ukuva amazwi kaYehova.
Baya kubhadula bethabathela kolunye ulwandle, base kolunye ulwandle; bethabathela entla, base empumalanga; betyhutyha,befuna ilizwi likaYehova, bangalifumani.
Ngaloo mini uya kuwa isiduli umthinjana omhle nomlisela,linxano.
Bona abo bafunga ityala lakwaSamari; bathi, Ehleli nje uThixo wakho, Dan; bathi, Ihleli nje indlela yaseBher-shebha:bona baya kuwa, bangabi savuka.